एलर्जीबाट बच्न यस्ता कुराहरू खानुहोस् - आर्थिक पाटी
एलर्जीबाट बच्न यस्ता कुराहरू खानुहोस्
२०७७-०४-९ बिचार / प्रतिक्रिया
एलर्जीले धेरै मानिसलाई सताइरहेको हुन्छ । शरीरले कुनै पदार्थप्रति धेरै नै संवेदनशीलता दर्शाउनुलाई एलर्जी भनिन्छ । एलर्जी कुनै पनि पदार्थबाट हुन सक्छ । मौसम बदलिँदा, धूलो, धूँवा, परागको कारण, खाद्यपदार्थ, कस्मेटिक, औषधिको प्रयोगलगायत अन्य थुप्रै कारणले एलर्जी हुन सक्छ । एलर्जीको प्रतिक्रिया नाक, आँखा, फोक्सो, घाँटी, श्वासप्रश्वास प्रणाली, मुख, छाला आदि अङ्गमा पर्न सक्छ । यसको प्रतिक्रिया कहिलेकाहीँ पूरै शरीरमा पनि पर्न सक्छ । एलर्जीको उपचार गर्ने थुप्रै तरीका छन् । यदि तपाईं एलर्जीबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने आफ्नो खानामा एण्टी–एलर्जी वस्तु सामेल गर्न सक्नुहुन्छ ।
दिनदिनै एउटा स्याउ खानाले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुनुका साथै एलर्जी पनि टाढै रहन्छ । स्याउमा क्वेर्सेटिन फ्लाभोनोइड हुन्छ, जसले एलर्जी हुनबाट बचाउँछ ।
बेसारमा कर्कुमिन नामक पदार्थ पाइन्छ, जसमा एकदमै शक्तिशाली एण्टिअक्सिडेण्ट तथा एण्टिइन्फ्लेमिट्री तत्व हुन्छ । यी तत्वले एलर्जीको प्रतिक्रिया रोक्न सघाउ पुग्छ । सानो चम्चाको एक चम्चा बेसार तातो दूधमा राखेर दिनदिनै पिउँदा एलर्जीले असर गर्दैन ।
लसुन एण्टी एलर्जी भएको सुपर फूड हो । खानामा यसलाई सामेल गर्नु एकदमै जरुरी छ । यसले शरीरमा केही यस्ता इञ्जाइम्स एकत्रित गर्छ, जसले एलर्जीको रियाक्शनबाट जोगाउँछ । दिनमा एक वा दुईओटा लसुनका केस्रा खानु राम्रो हुन्छ ।
कागती खानाले रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्ने भएकाले सबै प्रकारका एलर्जी हराउँछ । यसमा भिटामिन सी तथा एण्टिअक्सिडेण्ट पाइन्छ । दिनमा एक गिलास कागतीपानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ।
सालमन चिसो पानीमा पाइने माछा हो । यसमा ओमेगा–३ फ्याट एसिड धेरै पाइन्छ । यो फ्याट एसिडले एलर्जीसँग लड्न सहयोग पुर्याउँछ । यसले फोक्सोलाई मजबूत बनाउनुका साथै एलर्जीबाट उत्पन्न हुने श्वासप्रश्वास बढ्ने, नाक बन्द हुने तथा रुघाखोकीजस्ता समस्या पनि हटाउँछ ।
हरेक दिन २ कप ग्रीन टी पिउनाले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ । साथै, तपाईं एलर्जीबाट पनि बच्न सक्नु हुन्छ ।
सखरखण्डमा बिटा क्यारोटिनका साथै पोटासियम, म्याग्नेसियम तथा भिटामिन–६ पनि पाइन्छ । यी सबै चिजले शरीरको सुजन कम गर्छन् । हरेक दिन दुई÷तीनओटा सखरखण्ड खाँदा शरीरमा एलर्जी हुन पाउँदैन ।
अदुवामा एण्टिइन्फ्लेमेटरी तथा एण्टिअक्सिडेण्ट गुण हुन्छन् । यी तत्वले एलर्जी टाढै राख्न सघाउ पुग्छ । अदुवा राखेको चिया दिनहुँ दुई कप पिउनाले शरीरलाई लाभ पुग्छ । अदुवाका साना दुई टुक्रा तरकारीमा पकाएर खानु स्वास्थ्यवद्र्धक हुन्छ ।
फर्सीको बियाँमा सिलियम तथा ओमेगाजस्ता एसिड पाइन्छ, जसले एलर्जी हुन दिँदैन । एक चम्चा फर्सीको बियाँलाई एक गिलास तातो दूधमा मिसाएर दिनहँ खानु राम्रो हुन्छ । तपाईं यसलाई सलाद, दही तथा अन्य खानामा पनि मिसाएर खान सक्नुहुन्छ ।
गुर्जोले बढाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, यस्ता छन् ५ फाइदा
अन्तरराष्ट्रिय रम दिवस २०२० ː केवल मदिरा मात्रै हैन रम, औषधिले जसरी गर्छ काम
बाथरूम गन्हाउने समस्या यसरी हटाऔं
अनलाइन गोपनीयता चोरीबाट कसरी बच्ने ?
देशभर १३ सय १३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, १४ सय ५५ जना डिस्चार्ज, ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ उपत्यकामा ६४५ जना कोरोना संक्रमित थपिए
कोरियाले ईपीएस नियममा संशोधन गर्दै, कम्पनी छाडेका कामदारले पनि सहजै काम गर्न पाउने
कोरोना संक्रमणबाट धरानमा थप दुई जनाको मृत्यु
बाँके र पर्सामा कोरोनाबाट दुई जनाको मृत्यु
पन्जाबले रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरलाई ९७ रनले हरायो
ओपो एफ१७ प्रो असोज ११ गते नेपालमा सार्वजनिक हुँदै
८ हजार एसएमईहरू दराज सहयात्री कार्यक्रममार्फत अनलाइनमा
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हप्तामा २ दिन बिदा दिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
सुर्खेतबाट शुरु भयो लाइसेन्स वितरण
शाओमी मी ४एक्स र मी एलईडी टिभी ४ए प्रोका साथ नेपालको स्मार्ट टिभी श्रेणीमा प्रवेश
जिओ फोर्डको फोर्ड फेस्टिव अफर
कनेक्ट आईपीएसमा थप बैंकका खाता अनलाइन भेरीफाई गर्न सकिने
विज्ञान प्रविधिमा विकास एजेन्सीको भूमिकाको बारेमा डिजिटल संवाद आयोजना
नोकियाले एकैपटक ३ फोन ल्याउँदै, के के हुनेछन् विशेषता ?
ओपो एफ१७ प्रो नेपालमा चाँडै सार्वजनिक गरिने